The MYAWADY Daily: ထရမ့်ပ် လက်ထက် အမေရိကန်မီဒီယာတို့ ဘယ်ဘက်လိုက်ယိမ်းမလဲ ?
ထရမ့်ပ် လက်ထက် အမေရိကန်မီဒီယာတို့ ဘယ်ဘက်လိုက်ယိမ်းမလဲ ?
အမေရိကန်တွင် မှန်းချက်နှင့် နှမ်းထွက် မကိုက်ဘဲ တက်တက်စင်အောင် လွဲသည့် သမိုင်းဝင် ရွေးကောက်ပွဲကို ပြပါဆိုလျှင် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပသော ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပ် နှင့် ဟီလာရီ ကလင်တန် တို့၏ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြရမည် ဖြစ်သည်။ ဝါရင့် နိုင်ငံရေးပညာရှင် များနှင့် နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသမိုင်း သုတေသီများ အားလုံးက ကလင်တန်သာ နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြ ချိန်တွင် ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပ် က မဲအရေအတွက် အသာစီးဖြင့် ကလင်တန်ကို အနိုင်ရရှိ ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ထရမ့်ပ်၏ အောင်မြင်ခြင်း သည် ရုရှားတို့ လက်ချက်မကင်း ဟု ဝေဖန်သံများပင် ထွက်ပေါ်လာရသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ထရမ့်ပ်သည် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ရက်တွင် သမ္မတတာဝန်ကို စတင်ထမ်းဆောင် တော့မည် ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသည့် မေးခွန်းတစ်ခု ကျန်ရှိနေသေးသည်။ အိုဘားမား ကပင် ထောက်ခံလွန်းကာ သမ္မတ စီးတော်ယာဉ် Air Force One နှင့်လိုက်ပြီး မဲဆွယ်ပေးခဲ့ ရသူ ကလင်တန်အား ကောင်းကြောင်းရေးကာ ထရမ့်ပ် မကောင်းကြောင်းရေး၊ ထရမ့်ပ်ကို ဆဲဆိုသည့် အခါတွင် မျက်နှာဖုံး စာမျက်နှာ၌ ဖော်ပြသည့် ကလင်တန် ဘက်ကို လိုက်ခဲ့သော မီဒီယာများသည် ယခု ထရမ့်ပ်သမ္မတ ဖြစ်လာသည့် အခါ ဘာလုပ်မှာလဲ ဟူသည့် မေးခွန်းပင် ဖြစ်သည်။
သမ္မတ မဲဆွယ်ပွဲများ ပြုလုပ်နေစဉ် အတောအတွင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပ် ၏ ဘက်တော်သား ဖြစ်သော မီဒီယာဟူ၍ မထင်မရှား မီဒီယာများသာ ရှိသည်။ ကမ္ဘာကျော် မီဒီယာကြီးများက ကလင်တန်မှ ကလင်တန် ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ အမေရိကန်တွင် ရှိသော မီဒီယာ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်သည် ကလင်တန်ဘက်မှ ရပ်တည်ကြသည်။ ယခု ကမ္ဘာကျော် Time မဂ္ဂဇင်းက ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်သည့် သမ္မတလောင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပ် ကို ထူးထူးခြားခြား အသိအမှတ်ပြု ရသည့် Person of the Year အဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်သည်။ ဟီလာရီ ကလင်တန်၊ ရုရှား သမ္မတပူတင်၊ ဥရောပသမဂ္ဂမှ ဗြိတိန် အောင်မြင်စွာ ခွဲထွက်နိုင်ရေး စည်းရုံးနိုင်သည့် ယူကစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် နိုင်ဂျယ်ဖရာ့ခ်ျ နှင့် ဖေ့ဘွတ် စီအီးအို မာ့က်ဇူကာဘတ် တို့ကိုကျော်ပြီးမှ ထရမ့်ပ် ကို ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
၄င်းသည် အမေရိကန် မီဒီယာတို့၏ ချက်ချင်း ပြောင်းလဲ သွားသည့် ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ တုန်းတွင် ထရမ့်ပ် အနိုင်မရစေရေး အတွက် ၄င်းတို့ကပင် မဲဆွယ်ကြသော မီဒီယာများသည် ယခု ထရမ့်ပ် ဘက်တော်သား ဖြစ်ရန် ပြန်လည်ကြိုးစား နေကြပြန်ပြီ ဖြစ်သည်။ ထရမ့်ပ်က ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရန် မီဒီယာကို အသုံးချ သည်ဆိုလျှင် မှားမည် မဟုတ်ပေ။ ကလင်တန်က စာမျက်နှာပေါ်တွင် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၄င်း၏ အောင်နိုင်ရေး ကြော်ငြာများ ထည့်ပြီးမဲဆွယ်သည်။ ထို အတွက်ပင် ဒေါ်လာသန်းချီ ကုန်ခဲ့ရသည်။ ကလင်တန်၏ မဲဆွယ်ပွဲ အသုံးစရိတ် သည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။ ထရမ့်ပ် က ၉၃၂ ဒသမ ၃ သန်းသာ ကုန်သည်။ ထရမ့်ပ်က စာမျက်နှာပေါ်တွင် ပါလာရန် ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စဉ် ၄င်း၏ ပါးစပ်ကိုသာ အသုံးချသည်။ ထရမ့်ပ်၏ ကြမ်းတမ်းသော စကားလုံး များကြောင့် မီဒီယာများ၏ ရှေ့မျက်နှာဖုံးတွင် ပါလာပြီး ထရမ့်ပ်အတွက် အခမဲ့ ကြော်ငြာပြီးသား ဖြစ်သည်။
ပိုက်ဆံပေးပြီး ကြော်ငြာမဲဆွယ် သည့် ကလင်တန် သည် ရှေ့မျက်နှာဖုံးတွင် ထရမ့်ပ်ကဲ့သို့ ခေတ်မစားပေ။ ကလင်တန် အဖို့ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်သည့် အသုံးစရိတ်ငွေ အားလုံး တစ်ပြားတစ်ချပ် မှပြန်မရခဲ့ပေ။ ထရမ့်ပ်က ရွေးကောက်ပွဲ အတွင်း Great America Again ဟူ၍ ဦးထုပ်ရောင်းခြင်း၊ စာအုပ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီ ဝင်ငွေ ရရှိသေးသည်။ စီးပွားရေးသမား ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပ် ၏ ဗျူဟာများပင် ဖြစ်သည်။ ၄င်းကို မထောက်ခံသည့် မီဒီယာများတွင် ကဏ္ဍတစ်ခု အနေဖြင့် အကြီးအကျယ် ခေါင်းစဉ် အမည်းကြီး များဖြင့် လူသိများအောင် ထရမ့်ပ် လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ပိုက်ဆံလည်း မကုန် ကြော်ငြာပြီးသား လည်းဖြစ် ရေဘူးလည်း မပေါက် ရေလည်း ပါသည့် ထရမ့်ပ်၏ ဗျူဟာမြောက်သည့် အကွက်ပင် ဖြစ်သည်။
ယခု ထရမ့်ပ်ဘက်ကို မီဒီယာများ ယိမ်းလာနေပြီဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ နာမည်ကြီး စာရင်းဝင်မီဒီယာ များကဝေဖန်ရေး ဆောင်းပါးများတွင် ယခင်ကလောက် ထရမ့်ပ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ဖို့ဝေးစွ၊ ထရမ့်ပ်နှင့်
ဆန့်ကျင်ဘက် အရေးအသား များကိုပင် ရှောင်လာကြပြီ ဖြစ်သည်။ ယခင်က ထရမ့်ပ်ကို တတိယ ကမ္ဘာစစ် ဖန်တီးနိုင်သူ၊ ကမ္ဘာကို ဒုက္ခပေးမည့် သမ္မတ စသည်ဖြင့် ပြင်းထန်သော ဝေဖန်ချက် များသည် ယခု အစအနပင် မကြားရ တော့ပေ။
ကမ္ဘာတွင် စံပြဖြစ်နေသော အမေရိကန်မီဒီယာ များ၏ မဟာ ဘက်လိုက်မှုကြီး ဖြစ်သည်။ မီဒီယာတို့၏ ဘက်လိုက်မှုသည် အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲ များတွင် ရှားပါးလှသည်။ ထရမ့်ပ်နှင့် ကလင်တန်တို့ ရွေးကောက်ပွဲ မှသာ ထင်ထင်ရှားရှားကြီး ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ၄င်းတို့ မဖြစ်စေချင်သူက သမ္မတ တစ်ယောက် ဖြစ်သွားခဲ့သည်။
၄င်းတို့သာမက နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများကရော ဝေဖန်သူများ ကပါ အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကလင်တန် သာနိုင်မည်။ ထရမ့်ပ်ကတော့ သမ္မတဖြစ်ရန် မထိုက်တန်၊ ကလင်တန် က သူ့သက်တမ်း တော်တော် များများကို နိုင်ငံရေး လုပ်လာသူ၊ ထရမ့်ပ်က နိုင်ငံရေးထဲ အခုမှဝင်လာသူ စီးပွားရေး ဦးနှောက်သာ ရှိသည် စသည်ဖြင့် ကလင်တန်ဘက်က သာမဲအများစု ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ထိုမျှမကသေး ကြိုတင်စစ်တမ်း ကောက်ယူမှု များတွင် ကလင်တန်က ထရမ့်ပ်ထက်၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ထောက်ခံမဲ ကလည်း သာနေသေးသည်။ အမေရိကန် ပြင်ပကမ္ဘာ တွင်လည်း ထရမ့်ပ် ဘက်တော်သား ဟူ၍ လက်ချိုးရေတွက်၍ ရသည်။ အများစုကတော့ ကလင်တန် မှ ကလင်တန် ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာလေလေ ကလင်တန်၏ ထောက်ခံမဲများ ကျဆင်းလေလေ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကလင်တန် ထောက်ခံမှု နှင့်ထရမ့်ပ် ထောက်ခံမှုကြား ကွာဟမှုသည် ၅ ရာခိုင်နှုန်း လောက်သာ ရှိသည်။
အမှန်တကယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပချိန်တွင် ထရမ့်ပ် က မဲအရေအတွက် အသာဖြင့် ကလင်တန် ကို နိုင်သည်။ ကလင်တန် အတွက် ဖိအားများက အီးမေးလ်များကို ဖျက်ခဲ့မှု၊ ထို့ပြင် ၄င်းခင်ပွန်း ဘီလ်ကလင်တန် သမ္မတဖြစ်စဉ် နိုင်ငံရေးတွင် ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မှု၊ ဘီလ်ကလင် တန် ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လုပ်စဉ် မိန်းမရှုပ်မှု၊ ထိုအမှုကို ကလင်တန်က ၄င်း၏ဥပဒေ ကုမ္ပဏီဖြင့်ဖြေရှင်းမှု စသည့်လုပ်ရပ် များသည် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခါနီးမှ အလျှိုအလျှို ပေါ်ထွက် လာသည်။
ထိုအချိန်တွင် CIA ညွှန်ကြားရေးမှူး က ကလင်တန် ကို အီးမေးလ်ကိစ္စ အတွက် ပြန်လည် တရားစွဲမည်ဟု ဆိုလိုက်သောအခါ ကလင်တန်အတွက် ထောက်ခံမဲသည် ထပ်လျော့သွား ရပြန်သည်။ သို့သော်လည်း မီဒီယာတို့သည် ထရမ့်ပ်နှင့် ယှဉ်လျှင် ကလင်တန်မှ ကလင်တန် ဖြစ်နေကြ သေးသည်။
ထရမ့်ပ် ကောင်းကြောင်း ဆိုလျှင် ဖော်ပြရန် ဝန်လေး နေသလောက် မကောင်းကြောင်း ဆိုလျှင် ရှေ့ဆုံး ကဖော်ပြကြသည်။ ယခုတော့ ၄င်းတို့ မဖြစ်စေချင်သည့် ထရမ့်ပ် သမ္မတ ဖြစ်လာသောအခါ ထိုအချိန်က ဘက်လိုက်ခဲ့သော အမေရိကန်မီဒီယာ တို့အနေဖြင့် ဘယ်ဘက် ထပ်ယိမ်းဦးမလဲ ဟူသည့် မေးခွန်းသည် စောင့်ကြည့်ရန် ဖြစ်လာကြောင်း တင်ပြလိုက်ရ ပါသည်။
Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး, သတင်းမီဒီယာ